‘एनआइसीले एनबिए सदस्यता त्यागेर एक्लै हिँड्छु भन्न किन नपाउने ?’
एनआइसी एशिया बैंकलाई भद्र सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउन भनेर २७ वटा बैंकलाई पत्र पठायो । ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार एनबिएले राख्नसक्छ ? यसले आगामी दिनमा कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ला ?
-पहिला त द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो, त्यो हेर्नुपर्छ । एउटा कुरा तपाईले ब्याजदरको हेर्नुपर्छ, अर्को विदेशी मुद्रा विनिमयको कुरा हेर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा सबै बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर एउटा रेट कायम गर्छन । त्यसमा हामी कहिल्यै पनि विवाद गर्दैनौ । ब्याजदरको कुरा पनि त्यस्तै एउटा भद्र सहमति हो । जथाभावी डलरको रेट भयो वा विदेशी मुद्रा विनिमयको दर भयो भने त्यसले उतारचढावपूर्ण र नकारात्मक अवस्था ल्याउँछ । यसकारण एउटा सहमति कायम हुन्छ र यसले गर्दा व्यवस्थापन राम्रोसँग भइराख्छ । बाध्यकारी त होइन, तर नमान्दा बिग्रन्छ भनेर त्यही चिजलाई सबैले विश्वास गरेका हुन्छन् । यसमा पनि ब्याजदरको अनावश्यक उतारचढाव भयो । उतारचढाव हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो लडाई नै ब्याजदर(रिसोर्सेस) मा छ । त्यसमा एउटा केही हदसम्म सन्तुलन राखौ, उतारचढाव ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि ब्याजदर करिडरको अवधारणा ल्याएको छ, ब्याजदरलाई विभिन्न किसिमले ठोस दिशामा राख्ने प्रयास सरकारबाट, नेपाल राष्ट्रबैंक लगायत विभिन्न निकायबाट भइरहेकै छ । यसमा बैंकर्स एशोसिएसन समेत एउठा ठूलो स्टेक होल्डर हो, २८ वटा बैंकको संस्था हो । भोलेन्टियर्ली एउटा रेट भन्दा नबढौ भनेपछि कुनै एउटा बैंकले त्यसरी गर्दा यसले सिस्टेमिक रिस्क ल्याउनसक्छ ।
-सामाजिक संस्थामा कानून भनेको त्यसको विधान हुन्छ । सबैले सहमति गराउँछन र सबैको सहमति छ भने त्यसको बर्खिलापमा जानुु हुँदैन । तर, अर्कोतर्फ कोही कसैले म सदस्य बन्दिँन भन्न पनि सक्छ । सदस्य बनिसकेपछि चाहि म सदस्यता पनि निरन्तर गर्छु, र आफ्नो मनोमानी गर्छु भन्नलाई सुहाउन्न ।
तपाईको भनाई भनेको एनआइसी एशियाले कि त एनबिएको सदस्यता त्याग गर्नुपर्यो, होइन भने एनबिएको निर्णय मान्नुपर्यो भन्ने हो ?
-हो । तपाई समाजभित्र बसेर सधैं हल्ला गरेर हिँड्छुु भनेर हिँड्दा छिमेकीले हल्ला नगर भन्न पाउँछ । हल्ला गर्ने तपाईको अधिकार हो, हल्ला नगर भन्दा म छिमेकी नै त्याग्छुु भनेर हिँड्नुुभएन नि । फेरि यो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुरा हो । ब्याजदरमा उतारचढावमा आउने गतिविधि नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
यो द्वन्द्वको समाधान चाहि के हुनसक्छ ?
-यसको समाधान सजिलो छ । एनआइसी एशियाले रेट डाउन गरे त सबै सिद्धिहाल्यो नि । ठूलो कुरा केही नै छैन । एनआइसीले ठूलै अपराध गरेको पनि होइन, एनबिएले पनि ठूलै सजाय गरेको होइन ।
Read more at http://www.bizshala.com/story/%E2%80%98%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%86%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%87#H5fZfzrzcEYVmbir.99
फ्री इकोनोमी भनेको मतलब छाडा इकोनोमी होइन । त्यसलाई लगाम त लगाएको हुन्छ नि, एउटा लगाम लगाउनुु फ्री इकोनोमीको बर्खिलापमा छैन । तपाईले आज प्लेनको फेयर हेर्नुभयो भने संगठित संस्थाबाट उनीहरुले फिक्स्ड गर्छन् । त्यस्तै गाडीको भाडा, बजारमा हिँड्ने सवारीसाधनको प्राइस पनि एउटा तहबाट फिक्स्ड गर्छौ । भनेपछि यो फ्री इकोनोमी हो, तर फिक्स्ड त छ नि । दूधको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, बिजुलीको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, त्यो कार्टेलिङ त होइन नि । त्यसकारण अनावश्यक उतारचढाव नहोस्, सिस्टममा प्रभाव नपरोस् भनेर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जुन प्रयास भएको हो, त्यो सराहनीय हो ।
एनबिएले लिगल्ली उसलाई केही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कानूनी प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउनसक्छ । जस्तो, हामी चार–पाँच जना मिलेर एउटा क्लब खोल्यौ, एउटा समूह खोल्यौ, त्यो समूहको नियम कसैले मान्दैन भने कि त ऊ छाडेर जानुुपर्छ, वा अरुले निश्कासन गर्न सक्छ । समूहभित्र भएपछि समूहले भनेको मान्नुुपर्छ । मेजोरिटीको नियमलाई मान्नुुपर्ने हुन्छ । तर, नमान्नेले किन मानेन् र मनाउनुपर्नेले किन मनाउन सकेन भन्ने पक्ष पनि हेरिनुपर्छ, त्यो उहाँहरुलाई थाहा हुने कुरा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा ब्याजदरलाई उतारचढाव हुन नदिनुु नै उत्तम हुन्छ ।
ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार त एनबिएलाई हुन्न नि त । यो कोणबाट हेर्दा एनबिएले एनआइसीलाई बढी नै पेल्न खोजेको जस्तो देखिन्न ?
2018-03-11 - 563 view(s) - bizshala